SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲပြင်သစ်ဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲပြင်သစ်ဝေငှ
1. သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကဒ် SanDisk လွန်ကဲနှင့်အတူသင့်လျော်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုအောက်တွင်ကို select ပေးပါ.
>>>>စဉ်းလဲခြင်း : သင့်လျော်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ကိုမဆိုကို select, တစ်ခုခုကိုRescuePRO®, Deluxe RescuePRO®ဖြစ်ပါသည်.
**** သင်တစ်ဦးကူပွန် SSD ကိုRescuePRO®ရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. သင်၏ operating system များအတွက် button ကို select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.. ဒါဟာ button ကိုရွေးချယ်ထားဝယ်ယူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတည်ရှိသည်.3. သင့်ရဲ့ serial number ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ activation code ကိုခံယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် RPRID, အလည်အပတ် LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်**မှတ်ချက် : RescuePro Deluxe အဘို့သင့်အကောင်းအားဖြင့်အစတစ်နံပါတ်စဉ်ရှိပါတယ်လျှင် RPRID-0305,
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်သောနံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် SanDisk သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကိုငါပေးမည် RPRID-0305 တစ်ဦးကိုအစားထိုး serial number ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော **
Si vous utilisez Windows XP, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ pour obtenir une version de RescuePRO® Standard compatible avec XP ou ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ pour une version de RescuePRO® Deluxe compatible avec XP.